Chii chitsva muWhatsApp: Nharaunda, mafaera anosvika 2 GB uye nezvimwe | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 15/04/2022 09:08 | IPhone maapplication
WhatsApp ndeimwe yeanonyanya kushandiswa mazuva ese nevazhinji vevashandisi. Mumwedzi ichangopfuura, timu yekuvandudza yebasa rekutumira mameseji iyi yakawana chiito chayo pamwe chete uye yakaburitsa makuru ekugadzirisa. Yekupedzisira, semuenzaniso, yakavakirwa pakugadziridzwazve kweiyo izwi meseji interface izvo zvakabvumira hukuru hukuru mukati mekushandisa. Nhasi WhatsApp yave kuda kuenderera mberi nekuunza paki yayo nyowani yenhau. Pakati pavo pane kutangwa kwe Nharaunda, kutumira mameseji anosvika 2 GB kana kuita mameseji kuburikidza ne emojis. Isu tichakuudza.
1 Iyo huru package yeWhatsApp nhau inoratidzwa neNharaunda
2 Rimwe divi remari: maitiro kune mameseji uye mafaera anosvika 2 GB
Iyo huru package yeWhatsApp nhau inoratidzwa neNharaunda
Nharaunda paWhatsApp dzinobvumira vanhu kuti vaunganidze mapoka akasiyana vachichengetedza chimiro zvinoenderana nezvinodiwa zveimwe nyaya. Nenzira iyi, vanhu vanozokwanisa kugamuchira zvigadziriso zvinotumirwa kuNharaunda yese uye kuronga zviri nyore mapoka madiki ehurukuro kuti ataure nezve izvo zvinoenderana chaizvo neboka iro revanhu. Iyo Communities ficha icharatidzawo maturusi matsva ane simba emaadmins, sekutumira mameseji ekuzivisa kunhengo dzemapoka ese kana kupa boka ripi rekugovana ruzivo naro.
La main novelty ndiyo mharidzo ye Nharaunda paWhatsApp. Huwandu hukuru hwemapoka ekubata nemisoro yesangano, zano kana chinangwa ichokwadi chakazara mumainbox edu. Ichi chitsva cheNharaunda chinokutendera iwe kuti ugadzire rudzi rwe 'yakabatana WhatsApp' kuyedza kudzivirira huwandu hukuru hwemapoka asina kurongeka. Semuenzaniso, unogona kugadzira nharaunda ye'Vavakidzani'. mukati mechikamu ichocho Iwe unogona kugadzira mapoka akawanda sezvaunoda uye mushandisi achasarudza kuti ndeapi mapoka ekujoinha, achigara aine mukana wekusiya nharaunda, mapoka kana kubatana nawo.
Iyi ndiyo nyowani uye yakagadziridzwa interface yemameseji ezwi muWhatsApp
Mukati mechinhu chitsva ichi basa remutungamiri richatora rimwe basa rakakodzera. Vatungamiri vachakwanisa kutumira mameseji kunharaunda yese, kune mamwe mapoka mukati maro, pamwe nekukwanisa kugadzira mapoka matsva zvichienderana nezvinodiwa neboka.
Saizvozvowo, WhatsApp yakazivisa kuwedzeredzwa kune yekutanga boka admin maficha (yakazvimirira yeNharaunda). Magadzirirwo aya haana kuitika, asi isu tinoziva kuti imwe yacho ichave mukana wekudzima meseji yemushandisi kune wese munhu nenzira imwechete yatinogona kudzima meseji kune wese akanyorwa nesu.
Rimwe divi remari: maitiro kune mameseji uye mafaera anosvika 2 GB
Asi isu hatina chete nhau dzeWhatsApp Nharaunda. Kuburitswa kwenhau kwakashandiswa kuzivisa manzwi anofona kusvika ku32 vanhu yatinogona kuita nayo hurukuro dzeboka nenzira iri nyore. Nenguva isipi huwandu hwevashandisi mumafoni evhidhiyo hunogona kuwedzerwa, kunyangwe basa racho richinyanya kuomera tichifunga kuti zvidzitiro ndizvo zvavari uye saizi yavo inofanirwa kushanda nekuwedzera kwehuwandu hwevashandisi mukufona kwevhidhiyo.
Chimwe chinhu chakaziviswa zvakare chakarwiwa zvakanyanya kubva kune vashandisi: tumira mafaera anosvika 2 GB mumapoka uye muhurukuro dzega. Kusvika ikozvino, muganho waive 100 MB, huremu husina musoro uchifunga mamwe masevhisi uye mamwe maapplication akafanana neWhatsApp aive nemuganho we2 GB.
WhatsApp inosvitsa dhizaini nyowani yeprofile yemushandisi
Pakupedzisira, Maitiro ane emojis kune mameseji achaverengerwa. Icho chinhu changa chataurwa nezvacho zvakanyanya mumavhiki apfuura uye kuti takakwanisa kuona mune ichangoburwa yeruzhinji betas yeWhatsApp. Kuti vapedze chiziviso nekambani, ivo vanotaura nezvemakwikwi:
Nepo mamwe maapplication ari kugadzira chats kumazana ezviuru zvevanhu, isu takasarudza kutarisa pakutsigira mapoka ari chikamu chehupenyu hwedu hwemazuva ese. Nharaunda paWhatsApp dzichangotanga uye chimwe chezvinangwa zvedu kuramba tichigadzira zvitsva zvinotsigira gore rose. Tinofara zvikuru kuunza Nharaunda mumaoko evanhu.
Zvitsva zvese izvi Ivo vanozoonekwa mune yepamutemo WhatsApp app zvishoma nezvishoma mumavhiki anouya. Isu tichakuzivisa iwe pavanenge vangooneka, asi nzira iri nyore yekuve nayo yese ndeyekuchengeta application ichivandudzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Chii chitsva muWhatsApp: Nharaunda, mafaera anosvika 2 GB uye nezvimwe